Zvepamutemo - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Sezvazvakaita nemamwe maindasitiri nhasi, mafemu emutemo haasi zvakare kumashure kana zvasvika pakuvepo pamhepo. Tauya kuzogamuchira kutenda kwekuti mabhizinesi, kusanganisira emafemu emutemo ari kumhanya zvine hukasha mukufamba. Kufamba kunopa kukwidziridzwa kune chaiwo mutemo tsika, inoshanduka nzvimbo yebasa. Ndosaka zvichinyanya kukosha kuisa mari mune yepamutemo webhusaiti webhusaiti iyo inoita kuti zvive nemhedzisiro kune vangangove vatengi uye nekushandurwa kwakanaka kwemigwagwa kuve inotungamira.
Newgenapps dhizaini yakachena, hunyanzvi hwekutarisa mawebhusaiti anotora mufananidzo wako wekambani yemutemo uye anouya akashongedzerwa nezvose zvishandiso zvinodiwa kuti ugadzire akawanda anokwanisa mafambiro. Isu tinoshanda mu "Cloud" yakavakirwa mhinduro pamwe ne "AWS" masevhisi. Isu tinogadzirira law firm webhusaiti dhizaini uye nekuvandudza kushambadzira mawebhusaiti emagweta.
1. Isu tinopa nyanzvi content management system yekureruka webhusaiti
2. Kushambadzira uye yekutsvaga injini mhedzisiro
3. Kusarudzika mabatiro evatengi
4. Logo dhizaini nekumaka
5. Kubudirira uye manejimendi yedhijitari yepamutemo mhando
6.Blog uye tsamba yetsamba iyo inobvumidza zvakapusa kugadzirisa izvo zvinoita kuti traffic comin